Ampidino Cafe Master APK ho an'ny Android
Ampidino Cafe Master
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Android (97.00 MB)
Ampidino Cafe Master,
Ny lalao Cafe Master dia lalao simulasi mahafinaritra izay azonao lalaovina aminny fitaovanao aminny rafitra fiasa Android.
Miomàna ho lasa tomponny cafe. Mora sy mahafinaritra kokoa ity noho ny tena zava-misy. Raha mampihatra ny fomba fahandro aseho anao marina dia azonao atao ny mamorona sakafo sy zava-pisotro malaza. Afaka miasa tsara ianao ao an-dakozia mahafinaritra. Manana ny fitaovana rehetra ianao, ny sisa tavela dia ny famoronana fahagagana miaraka aminizy ireo.
Sehatra hafa ahafahanao mandany ny fotoana malalaka anananao ary mahazo vaovao mahasoa ihany koa. Kafe, waffle na ranona ... Hitombo ny safidy raha ampitahaina aminny fahombiazanao. Izany no antony tokony hanatsaranao ny tenanao aminny famoahana zavatra tsara. Mila miasa mafy ianao hanatsarana ny cafe.
Raha tena fahombiazana no tadiavinao dia tokony hiezaka ny ho chef tsara indrindra ianao aminity sehatra ity. Lalao sarotra lalaovina, sarotra fehezina, nefa mahafinaritra. Raha te-ho tomponny lalao ianao dia azonao atao ny misintona ilay lalao maimaim-poana.
Cafe Master Specs
Haben'ny rakitra: 97.00 MB